एकताको यी ‘नागिन’ को हुन् ? (फोटो फिचरसहित) | Screennepal
एकताको यी ‘नागिन’ को हुन् ? (फोटो फिचरसहित)
२०७५, १० बैशाख सोमबारscreennepalfeature, Sliver screen0
काठमाडौं, १० बैशाख । भारतीय टेलिभिजन च्यानलबाट प्रसारण हुने थुप्रै कार्यक्रमहरुमध्ये ‘नागिन’ नेपाली दर्शकमाझ पनि लोकप्रिय छ । भारत र नेपालका टेलिदर्शकमाझ तिनै लोकप्रिय ‘नागिन’को तेस्रो सिजनमा करिश्मा टन्नाको इन्ट्रि भएको छ अर्थात करिश्मा एकताको नागिन बन्ने भएकी छन् ।
एकताले तेस्रो नागिनका रुपमा करिश्मा तन्नालाई छानेकी छन् । यससँगै एकताले आफ्नो टिम पूरा गरेको बताएकी छन् ।
एकता कपूरको एकदमै चर्चित कार्यक्रम हो, ‘नागिन’ । नाग परिवार कार्यक्रम तयार बनाउन अहिले व्यस्त छन् । एकताको हिट शो ‘नागिन’को दुई भागसम्म रहेका मौनी राय र अदा खान यसपटक बाहिएका छन् । उनीहरुको स्थान अनिता हसनदानी र सुरभि ज्योतिले लिएका छन् ।
‘नागिन’को यो सिजनमा शिवन्या अर्थात मौनी रायको स्थानमा सुरभि ज्योति हुनेछिन् । ‘बद्तमीजÞ दिल’ र ‘नागार्जुन’जस्ता सिरियलमा देखिसकेका पिरलवि पुरी सुरभिका अपोजिट हुनेछन् ।
पहिलो सिजनमा उक्त भूमिका अर्जुन बिजलानीले गरेका थिए भने दोस्रोमा करणवीर बोहराले । आउँदो जूनबाट ‘अन इयर’ हुने यस शोका लागि सुटिङ सुरु भइसकेको छ ।
‘नागिन–३’ मा कथा केही फरक हुने बताइएको छ । हालै रिलिज गरिएको एक टीजÞरमा केही मान्छेहरु एक युवतीलाई लादै गरेको देखिन्छ । ‘नागिन’को पहिलो र दोस्रो भागमा शिवन्या र शेषाको भूमिकालाई निकै रुचाइएको थियो । त्यो भूमिका मौनी राय र अदा खानले गरेका थिए ।
मौनी ठूलो पर्दामा आइसकेका छन् । उनले अक्षय कुमारका ‘गोल्ड’, रणबीर कपूरका साथ ‘ब्रह्मास्त्र’ र सलमान खानसँग ‘दबंग–३’मा काम गरेका छन् ।
Previous Post‘मेरो गीतले आत्महत्या गर्न प्रेरित गर्दैैन’ (भिडियो) Next Postलोकेन्द्र राईको तिमी गयौ..